Global Partner - uZigong waseHaiti Culture Co., Ltd
Culture Haiti (stock Ikhowudi: 870359), ombutho ekhethekileyo lacaphula, leyo iphuma uZigong mzi, idolophu ezaziwayo-kakuhle ezingenamandla ze wemithendeleko lantern. Okwangoku, iNkcubeko baseHaiti ibiba amashishini abaziwayo ngamazwe kwaye wazisa le mikhosi lantern emangalisayo kumazwe angaphezu kwama-40 kunye nemimandla ezifana USA, Canada, UK, France, Italy, New Zealand, Japan kunye Singapore, njl. Siye wazilungiselela wayesonwatyiswa ezinkulu usapho-enobuntu amakhulu ezigidi zabantu ehlabathini lonke.
Ngexesha uphuhliso engama-20, iNkcubeko baseHaiti yenze iimina iwonga elikhulu kwemigangatho high quality kwimisitho kunye neemveliso zethu. Olu phawu lwenza igama evela namahlakani ethu kunye nabathengi. Haiti usoloko nelunda ukusebenza kunye neenkampani ezifana Disney, Hello Kitty, The World Carnival, Coca Cola, China Central Television, kunye nezinye iinkampani ngamazwe ukukhuthaza nempembelelo amandla lwabo wemithendeleko yethu lantern.
Thina sinserely ukhangela amaqabane angakumbi ukubamba ezi festvials lantern grand kunye nokubonelela ubusuku kuvuya ngakumbi kwisixeko sakho.